Sunday August 28, 2011 - 19:52:57 in Sheekooyin by Super Admin
Nin Soomaali ah oo jooga wadamada reer-galbeedka ayaa lagu soo eedeeyay inuu dilay Nagtiisa. Markii Maxkamadii la keenay ayuu diiday Tarjubaankii ay dowladu u qabatay una balamisay mid luuqada si wanaagsan u yaqaana afka-ingiriiska . Waxaa uu T
Nin Soomaali ah oo jooga wadamada reer-galbeedka ayaa lagu soo eedeeyay inuu dilay Nagtiisa. Markii Maxkamadii la keenay ayuu diiday Tarjubaankii ay dowladu u qabatay una balamisay mid luuqada si wanaagsan u yaqaana afka-ingiriiska . Waxaa uu Tarjubaankii u u sheegay inuu sheegayo oo kaliya waxa uu u sheego oo kaliya. Hadalkiisii ayuu ku bilaabay “Naagtan Khaatiyan baan ka taagnahay, badahaygii bay gashay,ma nooli, nolosha ayay igu xabaashay, Naagtaydii kale way iga furtay, dukaankaygiina wuu kacay, wayna ilugoysay.
Tarjuubaankii ayaa waxa uu yiri.“I will tell you, what he told me, he is fed up by this woman, she enterred his ocean,she bured him alive,she open his other wife and his shop stand up.and she was cutting his leg.
ugu danbeyntii qaadigii ayaa waxa uu ku yiri arrinkan mid l agali karo maahan labadaan qofna waxa ay isku haystaan wax aan kala sari karno maahan dacwadan oo kalana waligay ima soo marin, si aan u xukuman am aqaan .kkkk
Ka dhiibo fikirkaada